Volvo FH/FM D12/13/ Renault DXI-D11 တွေ အခုချိန် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ ...
အတော်ဆုံး ယူရိုယာဉ်ပိုင်ရှင်များ နဲ့ အတော်ဆုံး ယူရိုယာဉ်မောင်းတို့ရေ...
အခုလို ပူပြင်းစိုစွတ်တဲ့ ၂၀၂၀ မိုးတွင်းအချိန်မျိုးမှာ VOLVO / RENAULT တွေမှာတွေ့ရ တတ်တဲ့ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Error ကုတ်တွေကတော့ MID128-PSID115-46-42 လို့သတ်မှတ် ထားတဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုတ်တွေအများစုရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အတွေ့ကြုံနဲ့ မှတ်တမ်းတွေ အရမှာတော့ အခုနှစ် ဒီအချိန် သတိပြုရမယ့် အချက်အချို့ နဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်အချို့ကို (အကျဉ်းချုံး) သတိပေး အကြံပြုပါ့မယ် ...
အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကတော့ Volvo-Renault ကားတွေရဲ့ Adblue ကို ကျော်ထားတဲ့ကားတွေမှာ Nox Failure အိပ်ဇောပြသနာကြောင့် Engine Torque Reduction 40% ခေါ်တဲ့ အင်ဂျင်ရုန်းအား ၄၀% ချထားခံနေရတဲ့ အင်ဂျင်တွေမှာ တာဘိုဆီကျော်နေတတ်ပြီး အင်ဂျက်တာဝါယာထုပ်တွေမှာ ကြိုးတွေ
ပေါက်တတ် ရှော့ဖြစ်တတ်တာ တွေ့ရပါမယ်။ မောင်းနေရင်း မကြာခန စက်သေသွားတတ်ပြီး ချက်ချင်းပြန်နိုးမရပဲ ၅မိနစ်ကြာလောက်မှ ပြန်နိုးပြီး အကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်နေတတ် တာကိုက အင်ဂျက်တာရှော့ကျ နေတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီး အင်ဂျင် ဆင်ဆာ ၅လုံး ဖြုတ်ဆေးဖို့လိုပါမယ်။
Engine Emission System Nox Error ...
ဒီ Nox Error ဖြစ်လာတာ Adblue ကျော်ထားရင်ဖြစ်တတ်တယ်..
Emission Nox Error ဖြစ်ရင် အင်ဂျင်စနစ်ကိုထိန်းကျောင်းတဲ့ Data Set တွေစစ်ကြည့် ရင် 40% Torque Reduction ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီ။ အင်ဂျင်အား ၄၈၀ မှာ ၅၀% လောက်ပဲထုတ်နိုင်တော့ ၂၄၀ အားနဲ့ တန် ၅၀ ကိုရုန်းနေရပြီလေ..
နင်းလေ ဆိုးလေ မနင်းရင် ပုံမှန်ပေါ့လေ..
ဆိုလိုတာက Adblue ကျော်ပြီးရင် Nox error မရှိရဘူး..
Nox error ရှိရင် Torque Reduction ခေါ်တဲ့ အင်ဂျင်ရုန်းအားကျပြီ..
ဒါဆို ဆီစားနှုန်းပိုမယ်၊ နော်ဇယ်တွေနာမယ်၊ ဘားတွေနာမယ်၊ တာဘို နာမယ်..
ရေရှည်မှာ အင်ဂျင်က အကျဘက်ဦးတည်ပြီ..
ဒီတော့ Adblue စနစ်ကို အင်ဂျင်စနစ်ကနေ အပြီးတိုင်ထုတ်လိုက်ရင်.. Nox Error မရှိနိုင်တော့ဘူးလေ.. တကယ်တော့ Complete System Downgrade ဖြစ်တဲ့ Euro5 ကို Euro2 အဖြစ် ဒေါင်းဂရိတ်ချ လိုက်မှသာ အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ပြသနာကင်းကင်း အသက်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လေစစ် Air Cleaner က စိုထိုင်းဆမြင့်ပြီး လေစစ်ဆင်ဆာ MAF ပျက်တတ်ကြပါတယ်။ Volvoရဲ့ Delphi Injector တွေက ရေငွေ့ ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတတ်တာတွေ့ရပေမယ့် အခုလိုမိုးတွင်းကာလမှာတော့ Petroleum Naphtha Solvent / Petroleum Detergent တွေပါတဲ့ ဆီသန့်ဆေးရည်ကို ၁ပတ် ၁ကြိမ်လောက်သုံးပေးတာ နော်ဇယ် တွေအတွက် ထိရောက်မယ့်ကာကွယ်မှုဖြစ်ပါ တယ်။
(ဘရိတ်ပိုင်းအတွက်) ဘရိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ နောက်တွဲဆီလေပို့တဲ့ဘရိတ်ဘား Trailer Control Valve တွေလေယိုစိမ့်တတ် ပျက်တတ်တဲ့အတွက် မိုးနဲ့တိုက်ရိုက်မထိအောင်ဖုံးထားသင့်ပါ တယ်။ ဘရိတ်ရှူး ညိသလိုထင်ရတတ်ပြီး တကယ်တော့ ဟတ်ဘောဆီငတ်ပြီး ဂျမ်းဖြစ် တတ်ကြပါတယ်။ Brake Disc ပြားကိုပါ တလက်စထဲ စစ်သ လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဘရိတ်ရှူးတွေလဲပြီးရင်တော့ EBS Reset ချပြီး Brake Pad Calibration လုပ်ပေး ရပါမယ်။ ဘရိတ်အုံကိုတော့ တစစီဖြုတ်ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ဆီထိုးထားဖို့အထူး အလေးပေးလုပ်ရပါမယ်။ Meritor Type Brake Caliper Set တွေမှာ Brake Pad Adjuster ပိုင်းက Scania/MAN တွေမှာလို သိပ်မရိုးရှင်းတော့ ဖုံ/သဲ/မိုးရေ နဲ့တွေ့ရင် ဘရိတ်ရှူးခြမ်းတွေ အတင်းအလျှော့မှာ ဂျမ်းဖြစ်တတ်လွန်းလို့ သတိထားပေးပါ။
Volvo FM-FH / Renault PREMIUM DXI ကားတွေရဲ့ ဂီယာစနစ်ဟာ အသေးစိပ် စစ်ဆေးလို့ရအောင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်လို့ ကလပ်ပြား အထူအပါး ကလပ်ဘော အခြေနေ ဖင်းဂါးမောင်း အခြေနေ စတဲ့ မဖြစ်မနေစစ်သင့်တဲ့အချက်လက် တွေကို အနည်းဆုံး ၆လတစ်ကြိမ် တော့ စစ်ထားမှသာ လမ်းမှာ ကလပ်ပလိပ်ကုန်သွား တာတို့ ကလပ်ဘောကြွေတာတို့ စတဲ့ ပြသနာတွေကို ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၆လတစ်ကြိမ် Clutch System Calibration လုပ်ထားပေးလိုက်ရင် ကလပ်ပြားတစ်ချပ် ဘယ်လောက် ကြာကြာအသုံးခံ တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့သိရမှာပါ။
Clutch Calibration လုပ်တယ်ဆိုတာ..
- အသစ်လဲလိုက်တဲ့ကလပ်ပြား ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကလပ်ပြားရဲ့ အထူပါး နဲ့ ပွတ်တိုက်နှုန်း..
- ဖင်းဂါး နဲ့ ကလပ်ပြားအကွာဝေး.. စတာတွေကို ဆင်ဆာတွေသိအောင် ပြန်လည် ချိန်ညှိပေးခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်..
- မလုပ်မိရင် အရင်ကလပ်ပြားအဟောင်းက တန်ဖိုးတွေနဲ့ပဲ အလုပ်ဆက်လုပ်နေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်..
- ကလပ်ပြားကုန်တာပိုမြန်မယ်၊ ဖင်းဂါးကျမယ်၊ ကလပ်ဘောနာမယ်.. စတာတွေက နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေပေါ့..
တာခိုဂရပ်ကလည်း ဂီယာအတက်ကျ ပြောင်းလဲမှုမှာ အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်လို့ တာခိုဂရပ်မှာ Power Interruption ! Sensor Fault ! ဒီလိုစာလေးတွေတွေ့ရပြီဆိုရင် အချိန်ဆွဲလေ ကုန်ကျစရိတ်ပိုလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Volvo FH / Renault DXI-450/460 *** EEV Class တွေကတော့ လက်ရှိမှာ အမာဆုံး ဆရာကြီးတွေအဖြစ် ရှိနေပေမယ့် အပေါ်ကအချက်လက်တွေကို မလုပ်မိခဲ့ရင်တော့ ...
ရတယ် .......... ကိုယ်ရှိနေတယ် ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး ...
ကိုယ့်ဆီလာရင်တော့ မတ်တော့ တပ်လာခဲ့ပါ ... ဖုန်းတော့ ကြိုဆက်ပေးပါ ...
ကိုရစ်ကီကျော်(မြန်မာမော်တော်) ယူရိုကားကြီးအထူးကုဆားဗစ် နှင့် မူရင်းထုတ်အပိုပစ္စည်းများ
၀၉-၇၈ ၅၅၅ ၉၁၁၉